. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: January 2009
ကျမမှာ မိသားစုဝင် (၄) ယောက်ရှိတယ် .. ဖေကြီးရယ် မေကြီးရယ် ကျမရယ် မောင်လေးရယ်ပေါ့ .. ဒီနေ့ကတော့ မင်္ဂလာရှိတဲ့ ကျမအဖေရဲ့မွေးနေ့ .. မနေ့ကတည်းကပဲ ရန်ကုန်ကိုဖုန်းဆက်ပြီး birthday wish လုပ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ် .. အသက်ကိုမှန်းပြောလိုက်တာမှားသွားသေးတယ် .. အသက်က ၅၄ နှစ်လား ၅၅ နှစ်လားလို့ ရမ်းဖြီးလိုက်တာ အဖေက ၅၆ နှစ်တဲ့ .. :P ဖေကြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး အသက်ရှည်ရှည် အနာကင်းစွာနဲ့ သာသနာ့ အကျိုးကို ဆထက်ထမ်းပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ပဲ ဒီနေရာကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ..
လိမ္မာလိုက်တာ .. ဘယ်သူမှမပြောတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ပြောရတယ် .. :P
ရေးသားသူ moekhar at 1/23/2009 04:18:00 PM 10 comments:
ညီမလေးတစ်ယောက်ပို့ပေးတဲ့မေးက ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်တင်လိုက်တာပါ .. ကျမက ကြောင်လေးတွေကိုချစ်တတ်ပါတယ် .. အမြဲတော့မဟုတ်ဘူး .. ချစ်ချင်တဲ့အချိန် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကြောင်လေးတွေကို ချစ်တတ်ပါတယ် .. အောက်ကပုံလေးတွေကလည်း ကျမစိတ်ထဲ ချစ်စရာလေးဖြစ်နေလို့ တင်လိုက်တာပါ ..
Scroll Box လေး တင်နည်းလေးကိုပါ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တာပါ ..း)
ရေးသားသူ moekhar at 1/21/2009 05:46:00 PM6comments:
ရန်ကုန်ကို ပြန်ရမယ့်ရက် နီးလာပြီ .. အလုပ်ကနေခွင့်ပေးလို့ ၁နှစ်နီးပါးခွဲခွာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြေကို ပြန်နင်းရမယ် .. မိသားစုနဲ့တွေ့ရမယ် .. ချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ ပျော်နေတာအရမ်းပဲ .. ပျော်ပြီးအလုပ်တွေလုပ်တာလည်း အမှားချည်းပဲ :D ..
စလုံးကို ၂၀၀၈ခုနှစ် မတ်လ ၁ရက်နေ့က စရောက်တယ် .. ရောက်ပြီး အလုပ်ရရေးအတွက် လုံးပမ်းနေရတယ် .. အဲဒီချိန်ထိ ရန်ကုန်မပြန်ဘူး .. မပြန်ဘူးနဲ့ ကျွေးကျော်နေခဲ့တာလေ .. အကျင့်က တစ်ယောက်တည်းနေရတာကိုနှစ်သက်တယ် .. မိဘတွေနဲ့ ခုလို ဝေးဝေးလံလံ ခွဲဘူးတာလည်း ပထမဆုံးပဲ .. ခရီးထွက်တာက အစ မိဘပါမှ သွားဖြစ်တာ .. သွားလေ့ရှိတာလေ .. တစ်ခေါက်ပဲ သူငယ်ချင်းတွေချည်း ကျိုက်ထီးရိုးတက်ဖူးတယ် .. ရှားရှားပါးပါးတစ်ခေါက်တည်းပဲ ..
အလုပ်ရပြီး စိတ်ချလက်ချ နေနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ .. နေခွင့်ရပြီဆိုတာသိတော့ ပြန်ချင်တယ် .. အိမ်ကိုလည်းသတိရလာတယ် .. လွမ်းစရာလေးတွေကိုလည်း လွမ်းလာတယ် .. အလုပ်အတွက် ပူတဲ့အပူက လျှော့သွားတာကိုး ..
လေယာဉ်ကွင်းကို အကြောင်းကိစ္စ ရှိလို့ ရောက်တိုင်း အိမ်ပြန်ချင်လိုက်တာ .. ပြန်မယ့်လူရဲ့ သေတ္တာထဲပဲ ခွေခေါက် လိုက်သွားချင်စိတ်ပေါက်တယ် ..
စင်ကာပူကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြတယ်လေ .. နေပူ ရင်ပူ စင်ကာပူတဲ့ .. တကယ်လည်း ပူနိုင်တဲ့ စင်ကာပူပါပဲ .. နေ့လည်မှာနေကပူလိုက်တာ အပြင်တောင်မထွက်နိုင်ဘူး .. မိုးရွာချင်တော့လည်း ချက်ချင်း .. ပြီးလည်း ပြန်ပူတာပါပဲ .. (ခုချိန် ရန်ကုန်မှာ တော်တော်အေးနေတယ်တဲ့ .. သူငယ်ချင်းတွေကပြောကြတယ် .. ပြန်ရောက်တဲ့ချိန် အအေးကျန်ပါ့ဦးမလားမသိဘူး ..) အလုပ်မရခင်က အလုပ်ရဖို့ ပူရတယ် ပြေးရ လွှားရတယ် .. အလုပ်ရပြီဆိုတော့ pass တင်ဖို့အတွက် ပူရပြန်ရော .. pass ကျပြီဆိုပြန်တော့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တယ် .. လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင်ပူရပြန်ရော .. နာမည်ကိုက ပူနေတော့လည်း လာသမျှလူ ပူရတော့တာပဲလားမသိပါဘူး ..
ဘာပဲပြောပြော ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရမှာနေရဆိုတာလိုပဲ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆုံးအောင်တော့ လျှောက်ရဦးမှာပါပဲ ..
လာမယ့် စနေမှာ အိမ်ပြန် အလွမ်းသယ်ရမယ့် အရေးတွေးပျော်နေပါတယ် .. ရတဲ့ခွင့်က ၂၄ရက်ဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နေပျော်တယ်ပဲ ဆိုရမှာပေါ့ .. တကယ်တော့ မလောက်ပါဘူး .. ဒီထက်များများရချင်သေးတာ .. ခုတော့လည်း ရသလောက်လေးနဲ့ပဲ တင်းတိမ်ရမှာပေါ့ ..
ခုမှတန်ဖိုးထားတတ်လာတဲ့ ခဏဆိုတဲ့ အချိန်
ရေးသားသူ moekhar at 1/21/2009 08:35:00 AM 13 comments:
ရေးသားသူ moekhar at 1/18/2009 09:14:00 PM4comments:
They�d seen this before
We�d be fine
And you�d come to see that you still loved me
And they said there�s nothing you can do
It�s something that he�s going through
That you�d wake up and see the light
And I just had to wait �til then
And nothing waited �round the bend
I was sure I�d never find someone
ရေးသားသူ moekhar at 1/17/2009 10:08:00 AM7comments:
ရေးသားသူ moekhar at 1/15/2009 08:22:00 AM9comments:
"ငှက်ပစ်ထွက်ကြမယ် .. ငါဖမ်းသွားကြမယ် .."
"ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး .. အပျော်ပေါ့ .."
သြော် .. တော်တော်ကောင်းကြတဲ့လူတွေနော် .. ကိုယ်ပျော်ဖို့အတွက် သူများအသက်နဲ့ရင်းရတယ်လို့ .. ဒီလိုလုပ်တော့ ဘယ်လိုများပျော်ဖို့ကောင်းလို့လဲ .. အသက်ကိုလုပြေးနေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို ကြည့်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းတာလား .. မသေမရှင် ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို ကြည့်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းနေတာလား ..
ဒီနေ့ မနက် ရုံးလာတဲ့လမ်းမှာ လူတစ်ယောက် ငှက်ပစ်နေတယ် .. မီးပွိုင့်မိလို့ ကားခဏရပ်ထားတုန်းမှာ မြေပေါ်ကို ငှက်တစ်ကောင်က ဖုတ်ကနဲ ကျလာတယ် .. နောက်လည်း ဝေးဝေးမှာ ပြုတ်ကျလာတာတွေမြင်ရတယ် .. မနက်စောစော ဒီမြင်ကွင်းမျိုးမြင်လိုက်ရတာ စိတ်ထဲမောသွားတယ် ..
ကျမကတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း အသားနာမှာ ကြောက်တတ်သူပီပီ သူများကိုလည်း နာကျင်အောင် မလုပ်ရဲဘူး .. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဘာမှမသိခင် ခြင်ဆိုလည်း လိုက်ရိုက်တာပဲ .. ကိုယ့်မကိုက်လည်း လိုက်ရိုက်တယ် .. လိုက်ဖမ်းလို့ မိရင်ပျော်တာကိုး .. ခုနောက်ပိုင်းတော့ သိသိကြီးနဲ့ သေအောင်လုပ်ဖို့ သိပ်မရဲတော့သလိုပဲ .. အရင်တုန်းကဆို မတော်တဆ ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ကို ပွတ်မိလိုက်လို့ မသေမရှင်ဖြစ်နေရင် ပိုနာမယ်ဆိုပြီး မြန်မြန်သေအောင်သတ်လိုက်တယ် .. :P မြန်မြန်ဝဋ်ကျွတ်အောင်လေ ..
နောက်တော့ သိလာတာက သတ္တ၀ါတွေအားလုံးက ကိုယ့်အသက်သေမှာကို အကြောက်ဆုံးပဲတဲ့ .. နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်လေးကိုတောင် မစွန့်လွှတ်ချင်ကြဘူးတဲ့ .. နောက်ဆုံးချိန်ထိ ရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားချင်ကြတယ်တဲ့ .. စာအုပ်တွေနဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေရဲ့ တရားတွေမှာ ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးလာတယ် ..
အသိဆိုတာရှိနေရင်တောင် အဲဒီအသိကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့က တော်တော်ခက်သေးတာပဲ .. ခုနောက်ပိုင်း ခြင်တွေ ပုရွက်ဆိတ်တွေကို လက်နဲ့ ဖျစ်ညစ်မသတ်ရဲပေမယ့် .. ပုရွက်ဆိတ်က ပန်းကန်မှာကပ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ရေနဲ့လောင်းချသေးတယ် .. :P .. သူတို့ကိုခါနေရတာ အလုပ်ရှုပ်တာကိုး .. ဒီလောက်မှစိတ်မရှည်တာ ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ပိုင်း ဘယ်သတ္တ၀ါ ဘယ်အင်းဆက်ဖြစ်ဖြစ် ကျမ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မသတ်ရဲတော့ဘူး .. (စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ပုရွက်ဆိတ်ကို ရေနဲ့လောင်းချတာကလွဲရင်ပေါ့ ..)
ပြောချင်တာက .. အပျော်ဆိုပြီး ငှက်ပစ်တာ ငါးဖမ်းတာတွေကို ကျမကတော့ ၀ါသနာမပါသလို ဒါကို ပျော်စရာလို့လဲမထင်ဘူး .. ၀မ်းရေးအတွက် ရှာဖွေစားသောက်ကြရတာဆိုတာက လွဲရင်ပေါ့ ..
သတ္တ၀ါရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ပြုဖူးတဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်အကျိုးတွေကို ခံစားနေရတာပဲလေ .. ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပဲပေါ့ .. တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း စဉ်းစားမိတယ် .. ကိုယ့်ရဲ လောဘ လျှာအရသာခံဖို့အတွက်လေးတစ်ခုအတွက် သူများအသားကို အရသာရှိရှိချက်စားနေတာ တရားမှတရားရဲ့လားလို့ ..
ရေးသားသူ moekhar at 1/12/2009 08:50:00 AM9comments:
သမီးအကျင့်အတိုင်း ဘယ်နေ့ဟာ ဘာနေ့ဆိုတာ ခုထိမသိတတ်သေးပါဘူး .. သတိမထားတတ်သေးပါဘူး .. ဒီနေ့မနက် သူငယ်ချင်းဆီက message ၀င်လာတယ် .. ဒီနေ့ ပြာသိုလပြည့်နေ့ အမေများနေ့တဲ့ ..
အမေတဲ့ စာလုံးလေးနှစ်လုံးနောက်မှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ သက်ရောက်မှုတွေ အများကြီး ..
အမေတဲ့ စာလုံးလေးနှစ်လုံးနောက်မှာ တာဝန်ယူမှုတွေ မေတ္တာတရားတွေ အများကြီး ..
အမေတဲ့ စာလုံးလေးနှစ်လုံးနောက်မှာ သားသမီးအတွက် ပူပန်မှုတွေ စိုးရိမ်မှုတွေ အများကြီး ..
အမေတဲ့ စာလုံးလေးနှစ်လုံးနောက်မှာ သောကတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီး ..
ဒီနေ့ အမေများနေ့မှာ သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမေ့ကို သားသမီးတွေနဲ့ အတူ နှစ်တွေ အကြာကြီး အတူနေနိုင်ဖို့ .. ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပြီး သာသနာပြုနိုင်ဖို့ သမီး ဆုတောင်းပေးပါတယ် ..
စိတ်မှန်းနဲ့ပဲ ကန်တော့လိုက်ပါတယ် ..း)
PS. လိမ္မာတယ်နော် :D
ရေးသားသူ moekhar at 1/11/2009 12:18:00 AM2comments:
ရေးသားသူ moekhar at 1/07/2009 03:03:00 PM 8 comments:
ခုတလော သမိုင်းစာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်နေတယ်လေ .. ဆရာချစ်ဦးညိုရေးတဲ့ စာအုပ်တွေရှာဖတ်နေဖြစ်တယ် .. ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရာဇ၀င် သမိုင်းကြောင်းတွေ ကိုပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေဖြစ်တယ် .. အခုဖတ်မိတဲ့စာအုပ်ကတော့ ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ (သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေမယ့် စကားများ) ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် .. ၀ိညာဉ်သစ်ကနေ ဖတ်ဖြစ်တာပါ ..
စကားတစ်ခွန်းက တစ်မြို့လုံးပြာကျမယ့်အရေး လူတွေ သေကြေပျက်စီးရမယ့် အရေးကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို .. သိပ်ရင်းနှီး သိပ်ချစ်ခင်ကြသူအချင်းအချင်း တစ်သက်မကျေနိုင်အောင် ရန်မက် ဖြစ်ပွားရတဲ့ အရေးတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ..
သာမန်လူအချင်းချင်းတောင် စကားတစ်ခွန်းနဲ့ သတ်ဟယ်ဖြတ်ဟယ် ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ ရှင်ဘုရင်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့ စကားတစ်ခွန်းအတွက် လူတွေ သေရတယ် .. စစ်မက်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတော့ သဘာဝကျတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပဲလို့ ဖြေသိမ့်ရမလား .. အဲဒီခေတ်တုန်းက ရှင်ဘုရင်အနီးအပါး ခစားရတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် လူများတကာထက်သာတဲ့ အခွင့်ထူးတွေ ရရှိသလို ဘုရင်ရဲ့ ဓါးကလည်း ကိုယ့်လည်ပင်းနား တ၀ဲဝဲပဲလို့ ခံစားမိတယ် ..
အခုစာအုပ်မှာ ရှင်ဘုရင်တွေရဲ့ စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်း တည်ကြည်တဲ့အကြောင်း ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတွေ ဖတ်မိတော့ လေးစား ကြည်ညိုမိတယ် ..
ဘုန်းကံကြီးလို့ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာပေမယ့် စောလူးမင်းတို့လို ကုလားကျမင်း(ခေါ်)အလယ်မင်းနရသိင်္ခ တို့လို မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေ အသိဥာဏ်မရှိတဲ့မင်းတွေကို တွေ့မိ ဖတ်မိပြန်တော့လည်း စက်ဆုတ်မိတယ် ..
ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မိလိုက်တော့ လူတိုင်း လူတိုင်းက ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးနေကြတာပဲ .. ကိုယ်လုပ်တာ ကောင်းရင် ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်းကောင်းမယ် .. ကိုယ့် သမိုင်းကြောင်းကောင်းဖို့သာ ကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ် .. ရှေ့မှာ သမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့ သူတွေရဲ့အကြောင်းကို ဖတ်မိပြီး ဆင်ခြင်မိဖို့အရေးကြီးတယ် ..
- ဒေါသရှေ့ထားတဲ့အတွက် အမှားသာများတတ်တယ် ..
- အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတဲ့အတွက် နောင်တသာ ရတတ်တယ် ..
- စကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စကားက အကောင်းဘက်ဦးတည်နေရဲ့လား .. အမှန်တရားဖြစ်ရဲ့လား ဆိုတာ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်သင့်တယ် ..
- ကျေးဇူးရှင်အပေါ် ကျေးဇူးမဆပ်နိုင်သေးရင်တောင်မှ ကျေးဇူးတော့မကန်းသင့်ဘူး ..
- အောင်မြင်မှုတစ်ခုအတွက် ရင်းနှီးရတယ် .. ပေးဆပ်ရတယ် .. အောင်မြင်မှုရဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး .. ကိုယ့်အောင်မြင်မှု တည်မြဲဖို့ က ပိုပြီးခဲယဉ်းတယ် ..
- ကိုယ်သိနေတဲ့ အမှန်တရားအတွက် အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ရဲသင့်တယ် .. မရပ်တည်နိုင်သေးရင်တောင် အမှန်တရားကို မျက်ကွယ်မပြုသင့်ဘူး ..
- ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအပေါ် တာဝန်ယူသင့်တယ် .. ကတိနဲ့ သစ္စာဆိုတာ လူတိုင်းရှိသင့်တဲ့ တည်သင့်တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ကျွန်မ ယုံကြည်တယ်လေ ..
ရေးသားသူ moekhar at 1/07/2009 09:12:00 AM 1 comment:
ရေးသားသူ moekhar at 1/06/2009 08:35:00 PM2comments:
၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတော့ အတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီ .. အဖေကပြောဘူးတယ် .. ညအိပ်ရာဝင်ပြီဆို နှဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး ဒီနေ့တစ်နေ့တာရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့် .. ဒီနေ့အတွက် ကိုယ့်ရဲလုပ်ရပ်က အပေါင်းလက္ခဏာပြသလား အနှုတ် လက္ခဏာပြလား ..
လူကြီးတွေက များသောအားဖြင့်ပြောတတ်ကြတယ် .. ရက်တစ်ရက်ကုန်သွားပြီဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ပညာရသလား ဥစ္စာရလား ကုသိုလ်ရသလားတဲ့ .. အနည်းဆုံးတော့ အကျိုးတစ်ခုရှိသင့်ပါတယ်တဲ့ .. ကျွန်မက ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းချတာနဲ့ အိပ်ပျော်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ နေ့တိုင်းမစဉ်းစားမိဘူး .. ခုတော့ နှစ်တစ်နှစ်ကူးသွားခဲ့ပြီ .. ဒါကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ကကျွန်မအတွက် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးတွေရှိခဲ့ပါလိမ့် .. နှဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားမလား .. ခုတော့ ကျွန်မ ကီးဘုတ်ပေါ်လက်တင်ပြီး စဉ်းစားနေပါတယ် .. :P
ကျန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ကို ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တော့ -
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ကျွန်မအတွက် ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့နှစ်လို့ ဆိုရပါမယ် .. ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေထဲမှာ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အရာတွေလည်းပါပါတယ် .. ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုပေးရတာက လောကရဲ့ သဘော သဘာဝတစ်ခုပဲလေ ..
၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျွန်မ မွေးကတည်းက နေလာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ခွဲခွာပြီး စင်ကာပူရဲ့ ရင်ငွေ့ကို ခိုလှုံခဲ့ရတယ် .. နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာပြီး အေးစက် ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းတဲ့ လူမျိုးခြားတွေရဲ့ အကြည့် စိမ်းတွေအောက်ကိုရောက်ခဲ့တယ် ..
ဒါပေမယ့် ကျွန်မကံကောင်းတယ်ပဲဆိုရမလား .. နေရေးထိုင်ရေးက အစ အလုပ်ကိစ္စ အဆုံး အစစ အရာရာ ချောချော မောမောဖြစ်ခဲ့တယ် .. အဲဒီအတွက်လည်း အမတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ် .. အမတွေသာမရှိရင် အခုလောက်အဆင်ပြေချင်မှပြေမယ် .. အလုပ်ထဲမှာဆိုလည်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုခြေထိုးမယ့်သူမရှိလို့ ကျေးဇူးတင်မိတယ် .. အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့ မြန်မာအကိုကြီးကလည်း အစစ မသိတာတွေကိုသင်ပေးတယ် .. တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ လူကြီးတွေအကုန်ကလည်း ကိုယ့်အပေါ်ကို ဖေးဖေးမမ ရှိလို့ ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ် ..
ဒီကိုလာတဲ့လူတွေ အများစုက အလုပ်ရဲ့ ဒဏ် .. အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့ ဒဏ်ထက် စိတ်ပင်ပန်းကြတာပိုများကြတယ် .. လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက မနာလိုဖြစ်လို့ ခြေထိုးခံရတဲ့လူတွေ .. အထက်လူကြီးမကောင်းလို့ ဒုက္ခရောက်ကြရတာတွေ ကြားနေတဲ့ထဲမှာ ကျွန်မက ကံလေးနည်းနည်းပိုကောင်းခဲ့လို့ ကံတရားကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် .. ရန်ကုန်ကနေ ၀ိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ် .. ဒီကံတွေဆက်ကောင်းနိုင်အောင် ဘာသာတရားနဲ့ ပံ့ပိုးဖို့ကို ကျွန်မ မမေ့ဖို့တော့ သတိထားရမယ် ..
ခုတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြီ .. ကျွန်မလည်း တစ်နှစ်စာ ပိုပြီး ရင့်ကျက်ခဲ့ပြီ တွေးခေါ်နိုင်ပြီလို့တော့ ယူဆမိတယ် .. ကိုယ်ရှုံးခဲ့ဘူးရင် အရှုံးထဲက သင်ခန်းစာယူတတ်အောင် ဘ၀ဆိုတဲ့ ကျောင်းကြီးက သင်ပေးလိုက်ပြီ .. နောက်လည်း သင်ခန်းစာတွေ ကြုံတွေ့ရဦးမယ် .. အဲဒီအတွက်လည်း ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်ရဦးမယ် ..
အားလုံးခြုံကြည့်လိုက်တော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ ကျွန်မအတွက် နေပျော်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ် .. ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကိုလည်း နောင်တ ကင်းနိုင်သလောက်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် မိပါတယ် ..
ရေးသားသူ moekhar at 1/05/2009 02:25:00 PM2comments:
၂၀၀၉ ကို ကူးသွားပြီးကတည်းက စာလည်းမရေးဖြစ် .. ရေးဖို့လည်းစဉ်းစားလို့က မရ .. စာအုပ်တွေပဲဖတ်ဖြစ်နေတယ် .. ခုတလောဖတ်ပြီးသွားတဲ့စာအုပ်တွေက မင်းလူရဲ့ (ခေါင်းလောင်းထိုးသော ၀တ္တုတိုများ) (ငိုအားနဲ့ရယ်အား) ၊ နီကိုရဲ ရဲ့ (ပန်းပွင့်ကိုဖယ်ကြည့်မှ မြင်ရမယ့် လမင်း) ၊ အကြည်တော် ရဲ့ (ဇော်က ကနေသည်) အဲဒါတွေကို ဖတ်ဖြစ်တယ် ..
ဆရာမင်းလူရဲ့ ၀တ္တုတိုလေးတွေက ဖတ်ရတာ အပမ်းမကြီးပဲ အတွေးလေးတွေရစေတယ် .. ဆရာ နီကိုရဲရဲ့ စာအုပ်လေးတွေကလည်း စိတ်ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးဖတ်လို့ကောင်းပြန်ရော .. ဆရာအကြည်တော်ကိုတော့ သူရဲ့ ကဝေပျို၏ နိဒါန်း ကစပြီး ရှာပြီးကိုဖတ်ဖြစ်တယ် .. ရန်ကုန်မှာကတည်းကပေါ့ ..
ခုတော့ ရန်ကုန်မှာလို စာအုပ်တွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေဖတ်ဖို့ မလွယ်တဲ့အချိန်မှာ စာအုပ်တွေတင်ပေးတဲ့ ၀ပ်ဆိုက်တွေ သူငယ်ချင်းတွေကို တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်မိတယ် ..
ဒီဆိုက်လေးကို လာလည်ဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း မိုးခါးခုဖတ်ပြီးတဲ့စာအုပ်လေးတွေ မဖတ်ရသေးဘူးဆို ၀င်ဖတ်သွားကြပေါ့ .. စိတ်ပြေလက်ပျောက် .. အားလုံးကတော့ သူများဆိုက်က ယူပြီး လင့်ထားတာချည်းပဲ .. :D
ရေးသားသူ moekhar at 1/05/2009 01:56:00 PM No comments: